Inkundla zeGalufu e-Sun City
I-Gary Player Country Club ne-Lost City Golf Course
Thatha umdlalo wakho ezingeni elisha ngesignesha yeGarry Player Golf Country Club kanye ne-Lost City Golf Course.I-Sun City Resort ibambe iqhaza leNedbank Golf Challenge kusukela ngo-1981 emhlabeni jikelele owaziwayo uGary Player yakhelwe fairways. Ukuqhakambisa izifundo ezimbili zegalofu zokuqhubela phambili zegalofu ze-18-hole kanye nezakhiwo ezinhle kakhulu, i-Gary Player Country Club ne-Lost City Golf Course eNingizimu Afrika, nakuba ihluke kakhulu, yenza isigaba sokuqala se-Sun City igalofu ngendlela ehle kakhulu. I-Sun City Resort iyindawo engu-187 km (116 miles) ukusuka eGoli esiFundazweni saseNorth West.Njengoba kunezigidi ezingaphezulu kuka-$ 4 000 000 ngemali eyinkokhelo, iNedbank Golf Challenge minyaka yonke e-Sun City ngoDisemba ngumcimbi omangalisayo oheha abadlali begalufu emhlabeni wonke eGary Player Country Club, eSun City empini yokuphakama.
Leli gaba eliyingqayizivele leGoli City lilukhuni futhi liyadingeka. Enye yezwe elide kunazo zonke, lilinganisa ngaphezu kwamakhilomitha angu-7 (4.3 miles) futhi idinga ukuhlala amandla nokuchithwa kubadlali. Izinombolo zokurekhoda zama-spectators ziza minyaka yonke ukuze zibuke lolu mncintiswano othakazelisayo futhi zijabulele ukuhlangenwe nakho kwe-Sun City.
I- Gary Player Country Club E-Sun City
Inkundla yokuqala ye-Sun City igalofu eyenziwe ngu-Gary Player, ethatha inhlonipho ephezulu ezweni elinamabanga amaningi omhlaba wonke. Abavakashi bazothola inkambo engu-18, engama-72 yokuhamba futhi egijima eceleni, umzila wokugijima wamakhilomitha angu-5 (3 miles).
I-Club House ibheka ama-fairways enhle kakhulu futhi ine-shop pro kanye nokuhlala kahle nokuzivocavoca. I-gymnasium inebaqeqeshi bomuntu siqu futhi kukhona i-studio ephrinta kanye nezinkantolo ezimbili ze-squash. Izinyathelo zokwelapha izinwele nezinwele zinikezwa ku-spa ebuye ifakwe u-Vichy Shower, i-hydro bath, i-spa pool kanye negumbi lomusi.
I-Lost City Golf Course at Sun City
Lokho kwakuthandwa igalofu eSun City ukuthi ukuklanywa kwesinye isikole kwabikwa uGary Player odumile. Isibopho kwakungukudala into ehluke kakhulu! Le nkambo engavamile engama-18, ngo-72 iyinkambo yenqola, ngokuhlukahluka kwezwe lokuhle okubandakanya i-mountain, desert and African parkland.
Phakathi kwezici eziningi zamanzi yizibi kanye nenhlabathi engozini ye-13. Akuyona inhliziyo epholile, kunezingwenya ezingu-20 zeNayile eziphilayo emanzini kule ndawo eluhlaza! I-Club House emangalisayo, uhambo lokushayela kanye ne-pro shop lihamba kancane ukusuka eNdlu yeLost City noma ukuhamba ngebhayisikili emaminithi amabili ukusuka eGary Player Country Club.
Zombili izifundo zeGoli City e-Sun City Resort zivaliwe ngezinsuku ezithile ngesonto ukugcinwa kwesimiso; sicela ubuze nombonisi wakho wezokuvakasha uSiyabona onobungane uma ufuna ukubhuka.
Iphakethe lakhe leholidi laseSun City le-Sun City eliyizinsuku ezintathu lizokusingatha endaweni yokuhlala ekhangayo yaseSun City Resort futhi ikubonise emifundweni emibili yegalofu eNingizimu Afrika....more